Iikholeji zaseMichigan: Qhathanisa noMthetho oMiselweyo wokuBala
Ukuqhathaniswa kweNxweme kunye neCandelo leNgcaciso yeeKholeji zeeKholeji ezi-13 eziphezulu
UMichigan ungumbuso omkhulu kunye neeikholeji zeminyaka emine ezigqwesileyo kunye neeyunivesithi. Itheyibhile engezantsi ibonisa idatha ye-ACT yemvume yokungena kwamanye amaziko angcono kakhulu kwimfundo ephakamileyo kwiphondo. Ukuqhathaniswa kwamacala ngamanqaku kubonisa abafundi abangama-50% abaphakathi ababhalisile. Ukuba amanqaku akho awela ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujoliswe ekujoliswe kuyo kwelinye lala manqaku aphezulu eMichigan .
Funda ukuze ubone indlela olinganisa ngayo, kwaye ubeke umgangatho wakho we-ACT ngokucacileyo.
I-FET Colleges ACT Ithekisthi Ukuqhathaniswa (phakathi kwama-50%)
IAlbion College 20 26 20 26 19 26 ubone igrafu
College of Alma 21 26 21 26 21 26 ubone igrafu
YaseArews University 21 29 20 30 19 27 ubone igrafu
College Calvin 23 29 23 31 23 29 ubone igrafu
State Valley 21 26 21 27 20 26 ubone igrafu
Ikholeji Yethemba 23 29 23 30 23 28 ubone igrafu
College of Kalamazoo - - - - - - ubone igrafu
University of Kettering 25 29 24 30 26 29 ubone igrafu
State Michigan 24 29 23 30 23 28 ubone igrafu
Michigan Tech 25 30 24 30 25 30 ubone igrafu
KwiYunivesithi yaseDetroit Mercy 22 27 22 27 20 27 ubone igrafu
IYunivesithi yaseMichigan Dearborn 22 27 22 28 21 27 ubone igrafu
Qinisekisa ukubeka ezi ziphumo ngembono. Zonke ezi kholeji kunye neeyunivesithi zivunyelwene ngokubanzi , ngoko ziza kuqwalasela izinto zombini kunye nezingezizo iimpawu xa zivuma abafundi.
Umgangatho onamandla we-ACT awuqinisekisi ukungeniswa, kwaye amanqaku aphantsi asho ukuba awukwazi ukungena. Khumbula ukuba ama-25% wabafundi abaneematriki ayenemigangatho ye-ACT ngaphantsi kweenombolo eziphantsi ezisezantsi etafileni.
Inxalenye ebalulekileyo yesicelo sakho kunaliphi le kholeji iya kuba yirekodi yakho yemfundo .
Amabanga aphakamileyo kwiiklasi zokulungiselela iikholeji ziyintliziyo yesicelo sakho. I-AP, IB, ii-Double Registration, kunye ne-Honors zifundo zinokudlala indima ephambili kwisicelo sakho.
Kwakhona kubalulekile kula maninzi kumaziko aseMichigan aya kuba ngamanyathelo ahlukeneyo kunye nokuzimela. I- essay yesicelo esiphumelelayo , imisebenzi yentshukumo ebalulekileyo kunye neencwadi ezilungileyo zinconywa zinokuthi zithwale ubunzima obukhulu ngexesha lokumkelwa.
Kwizikolo ezininzi, unokukwazi ukuphucula amathuba akho okuvunyelwa ngokubonisa umdla wakho . Izenzo ezinjengokutyelela i- campus , ukwenza udliwano-ndlebe olukhethiweyo , kunye nokusetyenziswa kwangaphambili , konke kunokunyusa amathuba okufumana ileta yokuwamkela.
Izinsuku zokubala Phakathi kweeDawa ezimbini kwi-Excel
Hack Attack! 18 Izibonakaliso zokuKhawula eziPhezulu kakhulu eziPhezulu
Inyathelo ngeNyathelo: Indlela yokuLahla iintlobo ezine ze-Fastballs
Iincwadi Eziphezulu NgamaHindu